ओली सरकार योजनाविहीन छ, जनता निरास छन्ः डा. कोइराला | suryakhabar.com
Home राजनीति ओली सरकार योजनाविहीन छ, जनता निरास छन्ः डा. कोइराला
ओली सरकार योजनाविहीन छ, जनता निरास छन्ः डा. कोइराला
on: ७ माघ २०७५, सोमबार २०:२३ In: राजनीतिTags: No Comments
जनकपुरधाम । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म कुनै उपलब्धिमूलक कार्य नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनले काँग्रेस सकारात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ भनका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन धनुषाद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलन महामन्त्री कोइरालाले सरकारले योजनाविहीन तरिकाले काम गरिरहेको आरोप लगाए । डा गोविन्द केसीको माग पूर्ण रूपले पूरा भएको छैन भन्दै सो सन्दर्भमा संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकलाई अध्ययन गरी काँग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट गरे ।
एक प्रश्नको जवाफमा महामन्त्री कोइरालालो प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणका सचिवलाई कुटपिट गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो भने । यस किसिमको घटनाले सङ्घीयतालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ भन्दै उनले दुबै पक्षले यसको समाधान पहिल्याउनु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रबैंकद्वारा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको चुक्ता पूँजी बृद्धी
७ माघ २०७५, सोमबार २०:२३